Waa maxay sababtii Senatarada shalay loogu diiday in ay ka dhoofaan garoonka Muqdishu? – Kalfadhi
Labo Senator oo ka tirsan Baarlamaanka Aqalka Sare, ayaa sheegay in shalay laga reebay diyaarad u socotay magaalada Kismaayo, iyagoo ka mid ahaa mas’uuliyiin ka qeyb-gelli lahaa aaska Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo shalay lagu aasay Kismaayo.
Senator Iftiin Xasan iimaan (Baasto) iyo Senator C/llahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) ayaa shir jaraa’iid oo ay qabteen ku sheegay in shalay markii ay tageen Garoonka diyaaradaha, oo ay fuuleen diyaaraddii labaad ee meydka qaadi laheyd in amar lagu siiyay duuliyaha diyaarada in rakaabka soo deggaan.
Senator Fartaag, ayaa sheegay in markii diyaarada ka soo daggeen ay caddaatay sababta loo hor istaagay diyaaradda ay aheyd in isaga iyo Iftin Xasan Baasto laga reebo oo aanay raaci karin diyaaradda.
“Saddex xildhibaan oo kasoo jeeda Gedo, oo u dhoofi lahaa gobolka ayaa la diiday in ay garoonka Mogadishu ka baxaan, maanta anniga oo u socda tacsidaasi waa la ii diiday in aan garoonka ka baxo, taasi macnaheeda waa qabiilka aan ka dhashay yeynaan dhaq-dhaqaaq ka sameynin gobolkaasi, waxaa la joogaa xiligii ummadda la isku keeni lahaa ee ma ahan xiligii dadka la kala fogeen lahaa”, ayuu yiri.
Waxaa uu xusay in amarkaas ay bixiyeen taliska Nabadsugida iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada, isagoo nasiib darro ku tilmaamay in dowladda ku mashquusho in Siyaasi mucaarad ah laga reebo aas uu ka qeyb geli lahaa.
Dhinaca lale Sentor Iftin Xasan Baasto ayaa ku eedeeyay in taliyaha NISA iyo mas’uuliyiinta ay is hortaagaan aas ay ka qeyb geli lahaayeen, isla markaana loo xanibay dartood diyaaraddii ay raaci lahaayeen.
“Madaxweyne Farmaajo iyo taliska nabad-sugida waxa ay wadaan oo dhagaha iyo indhaha aan ka heysanay oo aan hadda ka aamusi karin ayaa jira. Jubbaland, gaar ahaan Gado wax ka socda ma ahan wax laga aamusi karo, waa arrin foolxumadeeda leh in madaxweynaha uu yiraahdo gobolka Gedo inta qabiilkeyga leh ayaa la go’ayaa”,
“Haddii la is khilaafay waa la wada hadli karaa laakiin haddii la yiraahdo xoog ayaan ku maquuninayaa, xal ma imaanayo”.
Madaxweyne Farmaajo, oo adeegsanaya taliska Nabadsugida, waxaa uu ku tumanayaa Dastuurka, waxaa sidoo kale xusay in aney ka aamusi doonin oo ilaa maxkamadaha ugu sareeya ee dalka ay gaarsiiyaan, ayuu xusay.